ग्लोबल टि-२० क्यानडा : सन्दिप लामिछानेको ५ खेलमा ८ विकेट ! | Cricket Himalaya |
ग्लोबल टि-२० क्यानडा : सन्दिप लामिछानेको ५ खेलमा ८ विकेट !
By Bhanu Sigdel Last updated Jul 13, 2018 246 0
नारायण पाण्डे/२७ असार, क्रिकेट हिमालय
[dropcap]ने[/dropcap]पाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका नियमित सदस्य सन्दिप लामिछानेको क्रिकेट करियर नेपालमा मात्र सिमित छैन उनि विभिन्न देशका विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी भइरहेका छन् । यहि क्रममा अहिले उनि क्यानडामा ग्लोबल टि-ट्वान्टी क्यानडा क्रिकेट प्रतियोगिता खेलिरहेका छन् । ६ टिम सहभागी यस प्रतियोगितामा उनि लासिथ मालिङगा को कप्तानिमा रहेको मोन्टरियल टाइगर्स टिमबाट खेलिरहेका छन् । प्रतियोगिता जुन २८ देखि सुरु भएको थियोे जुलाई १५ सम्म हुनेछ ।
पहिलो खेल जुन २९ मा Winnipeg Hawks विरुद्ध :
मोन्टरियल टाइगर्स को पहिलो खेल जुन २९ मा Winnipeg Hawks विरुद्ध थियो तर प्राविधिक कारणले सन्दिप यो खेलको लागि क्यानडा पुग्न सकेनन् । यो खेल Winnipeg Hawks ले ४६ रनले जितेको थियो ।
दोस्रो खेल जुन ३० मा Cricket West Indies B Team विरुद्ध :
आफ्नो टिमको दोस्रो खेल अगाडि नै सन्दिप क्यानडा पुगे र दोस्रो खेलमा प्लेयर एघारमा पनि परे तर प्रदर्शन केही खराब भयो । मोन्टरियल टाइगर्स ले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो । अन्तिम नम्बरमा ब्याटिङमा आएका उनले १ बलमा १ रन जोड्दै अविजित रहे । यस खेलमा उनले ४ ओभर बलिङ गरि ५७ रन खर्चिएर १ विकेट लिए । उनले आफ्नो पहिलो बलमै नो बल सहित छक्का खर्चिएका थिए । त्यस्तै उनले आफ्नो चौथो तथा खेलको १८.३ ओभरमा Jeremiah Louis को विकेट लिदै आफ्नो नाममा पहिलो विकेट लेखाए । यो खेल Cricket West Indies B Team ले २ विकेटले जित्यो ।
सन्दिप : ४-०-५७-१, १ (१)*
तेस्रो खेल जुलाई २ मा Vancouver Knights विरुद्ध :
दोस्रो खेलमा खराब प्रदर्शन गरेपनी उनि तेस्रो खेलमा पनि प्लेयर एघारमा परे । मोन्टरियल टाइगर्सले पहिले फिल्डिङ गरेको थियो । खेलको सातौं ओभरमा बलिङ गर्न आएका सन्दिपले मेडन ओभर गर्दै दोस्रो बलमा Chadwick Walton को विकेट लिए । यो खेलमा उनले ४ ओभर बलिङ गर्दै १ मेडन ओभर गरि जम्मा १९ रन खर्चिएर १ विकेट लिए । मोन्टरियल टाइगर्स को लगातार विकेट गए संगै उनले ब्याटिङ गर्ने मौका पाए । खेलको अन्तिम ओभरमा Andre Russell को बलमा उनले छक्का हाने त्यस्तै दोस्रो बल डट खेली तेस्रो बलमा १ रन लिए । उनले ३ बलमा ७ रन जोड्दै अविजित रहे । यो खेल Vancouver Knights ले १८ रनले जित्यो ।
सन्दिप : ४-१-१९-१, ७ (३)*
चौथो खेल जुलाई ४ मा Edmonton Royals विरुद्ध :
यो खेलमा पनि उनि प्लेयर एघारमा थिए । मोन्टरियल टाइगर्स ले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो तर ब्याटिङमा सन्दिपको पालो आएन । यस खेलमा पनि ४ ओभर बलिङ गरेका सन्दिपले आफ्नो पहिलो ओभर मेडन गर्दै पाँचौ बलमा Andre Fletcher को विकेट लिए । यो खेलमा उनले ४ ओभर बलिङ गर्दै १ मेडन ओभर गरि जम्मा १६ रन खर्चिएर १ विकेट लिए । यो खेल मोन्टरियल टाइगर्स ले १५ रनले जित्यो ।
सन्दिप : ४-१-१६-१
पाचौं खेल जुलाई ८ मा Toronto Nationals विरुद्ध :
राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका सन्दिप यो खेलमा पनि प्लेयर एघारमा परे । मोन्टरियल टाइगर्स ले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो तर ब्याटिङमा सन्दिपको पालो आएन । यस खेलमा पनि ४ ओभर बलिङ गरेका सन्दिपले आफ्नो दोस्रो ओभरको अन्तिम बलमा Nitish Kumar र अन्तिम ओभरको अन्तिम बलमा Navneet Dhaliwal को विकेट लिए । यो खेलमा उनले ४ ओभर बलिङ गर्दै ३४ रन खर्चिएर २ विकेट लिए । यो खेल Toronto Nationals ले १ विकेटले जित्यो ।
सन्दिप : ४-०-३४-२
छैटौं खेल खेल जुन १० मा Cricket West Indies B Team विरुद्ध :
यो खेलमा पनि सन्दिप प्लेयर एघारमा परे । मोन्टरियल टाइगर्स ले पहिला फिल्डिङ गरेको थियो । खेलको तेस्रो तथा आफ्नो पहिलो ओभर गर्न आएका सन्दिपका सुरुका ३ बल चौका गए तर सोही ओभरको पाचौं बलमा उनले Brandon King को विकेट लिए । त्यसपछि आफ्नो तेस्रो ओभरको दोस्रो बलमा Nikolas Pooran को विकेट लिए र आफ्नो अन्तिम ओभरको दोस्रो बलमा Shamar Springer को विकेट लिदै ३ विकेट पुर्याए । यो खेलमा उनले ४ ओभर बलिङ गर्दै ३१ रन खर्चिएर ३ विकेट लिए । यो खेलमा उनको ब्याटिङ गर्ने पालो आएन । यो खेल मोन्टरियल टाइगर्स ले ६ विकेटले जित्यो ।
सन्दिप : ४-०-३१-३
यस प्रतियोगितामा मोन्टरियल टाइगर्स ले ६ खेल खेली २ खेल जितेर ४ खेल हारेको छ । सन्दिप लामिछानेले ५ खेल खेलेका छन् । उनले ५ खेलमा २० ओभर बलिङ गर्दै २ ओभर मेडन गरि १५७ रन खर्चिएर ८ विकेट लिएका छन् । मोन्टरियल टाइगर्स ४ अंक सहित पाँचौ स्थानमा छ प्ले अफमा पुग्न टप ४ मा पर्नुपर्छ । मोन्टरियल टाइगर्स टप ४ मा पर्ने झिनो गणितीय सम्भावना बाँकी छ ।
सन्दिप लामिछाने : २०-२-१५७-८
[ Ave:19.62,Econ:7.85,SR:15.0), ८(४)]
Canada CricketGlobal T20sandeep lamichhane
सप्तरी प्रिमियर लिगमा अक्सनबाट ४८ खेलाडी छनोट
सप्तरी प्रिमियर लिग पहिलो दिन : बोदे बर्साइन बिजयी !